Ndụmọdụ 10 Craps Top | Oghere Free Twist - latabernasanlucar.com
Craps nwere ike ịdị mgbagwoju anya na ndị mbido na enwere ọtụtụ ihe kpatara nke a nwere ike ịbụ.
Tebụl Craps a na-ahụkarị nwere multitude nke nhọrọ ịkụ nzọ nke na-adịchaghị ka enweghị isi.
Nsogbu that a na-arịwanye elu websiten’eziokwu ahụ bụ na mgbe ị na-egwu Craps t casinos dị na ala, a na-enwe ọtụtụ ọgba aghara na gburugburu Craps okpokoro. Ndị mmadụ na-eti mkpu revived na-ekiri ọ bụla mpịakọta nke dais anya.
Ọ bụrụ na onye na-agba ụta daa na nọmba”aka nri” ndị egwuregwu gbara okpokoro Craps anya na-enwe obi ụtọ na ọtụtụn’ime ha na-enwe ọ cheụ dịka ndị egwuregwu egwuregwu egwuregwu mgbe nke a mere.
Nke a nwere ike ịbụ ezigbo ahụmịhe mgbagwoju anya maka ndị mbido na Craps.
Mana ozi ọma ahụ bụ na mgbe ị na-egwu crapsn’ịntanetị, ị gaghị echegbu onwe gị gbasara ndị otu egwuregwu gbara agba gburugburu. N’ezie, ọtụtụ ebe that a na-ebi ndụ na tebụl dịn’ịntanetị nwere nkuzi ngwa ngwa banyere otu esi egwu craps yana ebe ị nwere ike ịme craps na-enweghị self ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị na-eche ma ọ bụrụ t e nwere ụzọ dị egwu iji kpọọ craps ma ọ bụ usoro ọ bụla maka igwu egwu craps, echegbula. Anyị ga-eso gị tụlee ndụmọdụ dị jụụ maka craps nke ga – ga enyere gị aka belata ọnụ ụlọ ma nwekwuo ohere ị ga – ga esi na tebụl Craps pụọ na uru dị mma.
Craps NDipMỌD: 1: Mee ka Odzọ Siri Ike Gị
N’echiche anyị ma nweta nzọ kacha mma mgbe ị na-egwu craps bụ nzọ nzọ. A na-akwụ ụgwọ nkwụnye ụgwọ d e ezigbo nsogbu ma ọnụ ụlọ dị otu na-efu.
Ọnọdụ nzọ t rigged bụ nzọ dị iche nke a na-eme mgbe mpịakọta ga-apụta. A na-ekegide ọghọm nzọ gị na mbịambịa gị / abịakwa ịkụ nzọ ma gafee / agafela nzọ. O doro anya, na cha cha cha cha cha nwere ihu ụlọ internet mana nke a apụtaghị na nsogbu ahụ bụ nzọ kacha mma.
Ọtụtụ casinos ga-enye gị ohere ịme (ma ọ bụ dina) nsogbu ruo ugboro atọ akara aka gị. Ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na ị nzọ $ 10 na pụta si mpịakọta, ị nwere ike idowe ihe emegide nzọ ruo $ 30.
Jirichaa nzọ a. Ebe ọ bụ na cha cha na-akwụ ụgwọ dị mma na ya, ịkụ nzọ kachasị na-enye gị ohere kachasị mma iji nweta ego. Yabụ, ọ bụrụ t ị na-agba $10 t nzọ dị larịị (tupu ọ pụta), were (ma ọ bụ dinara) nsogbu t $30. Ọ bụrụ na nzọ gị dị larịị bụ $ 25, ị nwere ike ịzụta nsogbu rue $ 75.
Craps NDipMỌD: two: Na-adị njikere igwu”Akụkụ gbara ọchịchịrị”
Nke a bụ arụmụka arụmụka mgbe ị na-egwu Crapsn’ihi d e egwuregwu ndị ọzọ na tebụl gị nwere ike ọ gaghị amasị ya. Mgbe itinyere ebe nzọ na “adịghị abịa” nzo, ị na-nnoo na-akpọ ihe a na-akpọ “ọchịchịrị akụkụ”. Usoro a gụnyere ịkọwa nsogbu kama ịzụta nsogbu.
Na okwu dị mfe nke a pụtara na ị na-egwu nzọ megide onye na-agba ụta. Tupu ọ kụọ ebe ị nwere olile anya na nzọ na ọ na-apụta 7. Nke a pụtakwara na ị na-akụ nzọ megide onye ọ bụla na tebụl Craps nke only t ọtụtụ ndị egwuregwu craps ibe gị na tebụl nwere ike ịmasị ya ugbu a.
Cheedị echiche ime nke a na ala cha cha. Mgbe onye ọ bụla na-amalite ịtụkwasị nzọ ahụ na onye na-agba égbè ga-eti ebe tupu ya apụta a 7 mgbe ị nzọ megide ya. Cheedị echiche mmeri mgbe ndị ọzọ na-efu. Y’oburu n’inwe ndi enyi n’elu okpokoro ha nwere ike ghara inwe obi uto mgbe ihe a mere ma inwere ike ijuputa ha.
Ma ị nwere ike izere nke a mgbe ị na-egwu Crapsn’ịntanetịn’ihi na ị gaghị ahụ ndị egwuregwu an’onwe gị!
Craps NDipMỌD 3 : Debe 6 ma ọ bụ 8 iji merie
Enwere ọnụ ụlọ dị ala na ebe ịkụ nzọ t 6 t 8. houselọ ọnụ ụlọ bụ naanị 0.46% na tebụl na-akwụ 7: 6 maka ndị a. Nke ahụ bụ ezigbo ọnụ ụlọ mara mma!
Enwere ụzọ ise iji gbanye 6: 1-5, 2-4, 3-3, 4-2, na 5-1. Enwere ụzọ ise iji tụgharịa 8: 2-6, 3-5, 4-4 , 5-3, na 6-2. Ma ọ dị ugbu a, enwere ụzọ isii iji gbanye 7: 1-6, 2-5, 3-4, 4-3, 5-2, na 6-1.
Nsogbu ndị ahụ na-emegide gị, mana ọ bụghị ọtụtụ. N’okpuru ala, ebe 6 t Ray bụ wagers siri ike t rigged.
Craps Ntuziaka 4: Chọta cha cha ọnlaịnụ igwu egwu Craps na ntanetị
Anyị na-akwado igwu egwun’ịntanetị dị ka anyị kwuru na craps anyị maka ndu dummies.Otun’ime nnukwu ihe kpatara igwu egwu na ịgba chaa chaan’ịntanetị bụ na ọtụtụ casinos na-enye self love cha cha. Ọ bụrụn’inweta self service 100 percent ị ga – enweta otu ụdị self service ahụ cha cha cha cha na cha cha ha.
Anyị chọtara onyinye sitere t casinos kacha mma maka igwu egwun’ịntanetịn’okpuru:
100 Free Spins na Starbust site t deposit 10 nkwụnye self
100 Free Spins na Starbust website t deposit 10 nkwụnye self
100 Free Spins na Starbust website t residue 10 nkwụnye self
-Ewu gị daashi Njirimara!
Craps Ndụmọdụ 5: Dori megide 4 t 10
Enwere ụzọ atọ iji tụgharịa 4: 1-3, 2-2, na 3-1.
N’otu aka ahụ, enwere ụzọ atọ iji tụgharịa 10: 4-6, 5-5, na 6-4.
Websiten’elu, anyị maara na e nwere ụzọ isii iji tụgharịa a 7. Nke ahụ pụtara ohere nke ịhụ 7 tupu 4 ma ọ bụ 10 dị elu. Nyere nke ahụ, ọ bụ ezi echiche ịkwado ọnụọgụ ndị ahụ.
Nke ahụ pụtara na ị ga – ga enweta 1: two ma ọ bụrụ na ị hụ 7n’ihu 4 ma ọ bụ 10. You will ga-akwụkwa obere ọrụ (4 percent ) na cha cha ma ọ bụrụ t I merie. A na-ebo ebubo ọrụ ahụn’ihi d e nsogbu nke mmeri bụ maka ọdịmma gị.
Na-adịghị na-eche ruo mgbe pụta mpịakọta dina megide 4 t 10. I nwere ike ime unn’otu oge ị na-etinye gị ngafe akara nzọ. Ọ bụrụn’ịme nke a miniature hụ 7, ị ga – emeri akara ngafe ma merie ịkwụ ụgwọ maka self love gị.
Craps NDipMỌD: 6: Emela Ka Doublegha 4 ma ọ bụ 10 gị gaa na mpụga
Ka anyị kwuo t ị nzọ $25 t 10 t $25 t 4. On pụta mpịakọta, shot tụgharịa that a 10. Shed hapụ nzọ t 10 na 10 na-isi.
Nkịtị amamihe nwere ike na-atụ aro t I kwesịrị okpukpu abụọ nke ego na gị dina nzọ na nọmba 4 ka $50 na ọzọ nzọ (ma ọ bụ Anglịkan ma ọ bụrụ t shooter tụgharịa a 4 kama 10).
Ikwesighi izere ime nke ahụ. Naanị tinye nzọ na nsogbu zuru oke. Hapụ nzọ dị ugbua n’otu ego ahụ ma tinye nzọ nzọ na njem ma ọ bụ agafefe nzọ.
Iji maa atụ, ọ bụrụ d e mpịakọta mpịakọta nke daị ahụ bụ nọmba 10, hapụ self nzọ ahụ t $25 na nọmba 4 eldest gbue ya okpukpu abụọ $50 iji mejupụta ọnwụ gị na nzọ gị na nọmba 10.
Ndụmọdụ craps ise that a gbadoro ụkwụ ebe egwuregwu ị ga-eme mgbe ị na-egwu craps. Ugbu a, anyị ga-ekwu maka ịkụ nzọ ị kwesịrị izere t rigged.
Craps ND CraMỌD 7 : Na-eleghara Ngwá Ọrụ Ubi
E nwere mpaghara na tebụl Craps, akara”ubi”. Nwere ike ịchọta “ubi” dị n’etiti ebe akpọrọ “bia” na “agabigala mmanya”. Mpaghara akara mpaghara nwere nọmba ndị that a:
Nọmba mbu na nke ikpeazụ (2 t 12) akara gburugburu ya.
Ezubere mpaghara ebe a t tebụl craps maka ịme nzọ. Ihe nzọ bụ nzọ ị ga – eme ma nọmba ọ bụla nọn’ọhịa na tebụl craps ga – ga egosipụta na mpịakọta ọzọ.
Gwọ ịkwụ ụgwọ maka ịkụ nzọ na-adabere na ọnụọgụ nke gosipụtara na mpịakọta nke daị.
A ga-akwụ gị ụgwọ 1x nzọ nzọ gị ma ọ bụrụ na 3,4,9,10 ma ọ bụ 11 gosipụtara na mpịakọta ọzọ.
Ọ bụrụ na mpịakọta ọzọ bụ two, a ga-akwụ gị ụgwọ 2x.
Ọ bụrụ na mpịakọta ọzọ bụ 12 ị kwụrụ 3x ụgwọ.
Na ileba anya mbu nke a yiri ka ọ bụ ezigbo nzọ iji mara na enwere ọnụọgụ 12 ma ọ bụ nsonaazụ 12, ị nwere ohere 7/12 iji merie nzọ ma ọ bụ 58.33%.
Ma ọ bụrụ na ị banyen’ime ebe nzọ ọnụ ọgụgụ dị na craps bụ nzọ dị egwu ma nke a bụ ihe kpatara ya, ọnụọgụ nsonaazụ abụghị naanị ọnụọgụ nwere ike igosi (1 ruo 12) kamakwa na njikọta ha nwere ike igosi.
Enwere ụzọ 16 ị ga – ga esi tụgharịa 2,3,4,9,10,11 na 12 na daịlị abụọ.
Nọmba ahụ 1ice 2211312321413422431936945954963106410461055116511561266
Ebe enwere uzo iri abuo iji wepuo 5,6,7 Id 8.
Na ngụkọta, enwere nsonye 36 maka ọnụọgụ 12 niile.
Mgbe ị gbakọọ ihe gbasara nke puru omume nke mmeri ubi ị ga – achọpụta na ihe puru omume nke mmeri nke dabere na ihe ndị a bụ 16/36 ma ọ bụ 44.44% na ihe puru omume nke ịla nzọ bụ 55.56%.
Ugbu a ị nwere ike iche d e ọ bụrụ d e ị nweta two ma ọ bụ 12 ị ga-enweta ụgwọ 2x d e 3xn’otun’otu mana nsogbu nke ịnweta otun’ime ndị a bụ 2/36 ma ọ bụ 5.6percent ebe ọ bụ naanị otu ụzọ iji tụgharịa 2 d e 12.
Craps NDipMỌD 8 : Na-eleghara Egwuregwu Hardways anya
A”hardway” nzọ bụ nzọ nke gụnyere ịkụ nzọ na ihe ga-esi na ya pụta ma abụọ ahụ ga-enwe otu nọmba ahụ. A two Id two na-eme hardway nke 4. Ebe ọ bụrụ na ị nweta 1 m 3, a ga-akpọ un”ụzọ dị mfe” 4.
N’otu aka ahụ 3 na-eme hardway nke 6 t 2 t 4 na-eme ka ọ dị mfe 4.
A pụrụ ịhụ nza ndị a n’ụzọ doro anya n’etiti tebụl Craps tinyere ịkwụ ụgwọ.
N’ikwu ya, anyị kwuru ụzọ dị iche iche dịn’okpuru na nkwụnye ụgwọ ha:
Onyeka Onwenu – Iyogogo12222xx3339x8449x10557x
Merie hardway nzọ mgbe shot tụgharịa hardway nọmba ị nzọ nan’ihu ya ma:
1) apụta a 7 ma ọ bụ
two ) na-apụta nọmba hardway na”ụzọ dị mfe”.
Ihe puru omume nke ị na-emeri nzọ hardway bụ naanị 1 t 36 ma ọ bụ 2.78%. Nke ahụ bụ ụfọdụ nsogbu dị ala nke only t nza ndị a t rigged abaghị uru.
Eziokwu ọzọ na-adọrọ mmasị banyere nzọ that a bụ d e hardway nke 6 t Ray nwere otu ihe gbasara nke puru omume (2.78%) nke ọdịda dị ka 4 d e 10 mana nke mbụ na – ewetara gị ụgwọ 9x na nke ikpeazụ na – enweta gị ụgwọ nke 7x nke na – enweghị ihe ọ bụla uche.
Ọ bụrụ na ọ na-adị gị ka ọnwụnwa ịme hardway nzọ ka ọ bụrụ 6 ma ọ bụ 8 ka ha nwere ụgwọ dị elu.
Craps NDipMỌD 9 9: Na-eleghara Yo, Horn, na nke ọ bụla 7 anya
Anyị ga-akọwa ihe nzọ atọ ndị a dị mkpirikpin’okpuru:
The Yo nzọ bụ nzọ ebe ị nzọ na ọzọ mpịakọta nke dais ga-abụ 11. Bekwụ ụgwọ nke a yo nzọ bụ 16x
Mpi mpi bụ nzọ ebe nzọ d e ọzọ mpịakọta ga-abụ a 2,3,11 ma ọ bụ 12. payoutkwụ ụgwọ nke a mpi nzọ ke Craps na-adabere na nọmba. A two ma ọ bụ 12 -enweta gị a payout nke 30x t a 3 ma ọ bụ 11 na-enweta gị ụgwọ nke 15x.
N’ikpeazụ ihe ọ bụla nzọ nzọ bụ nzọ ebe ịgba nzọ na akwụkwọ mpịakọta ọzọ ga – abụ 7. Thekwụ ụgwọ nke ihe ọ bụla 7 nzọ na Craps bụ 4x.
Betszọ ịkụ nzọ ndị that a yiri ka ọ na-ewu ewu nke ukwuu na ndị egwuregwu craps ọkachasị ndị na-egwu craps t casinos dabeere na ala.
Mana nzọ ndị a abụghị ezigbo nzọ dị ka ị ga-achọpụtan’okpuru.
Ka anyị bido na ịkụ nzọ Yo.
Enwere naanị ụzọ two iji tụgharịa 11, 6, 5 6,5. Ọ bụrụ n’icheta na e nwere ụzọ iri abụọ na isii ị na-agbakọ ọnụ ọgụgụ niile.
Yabụ ihe omume puru inweta mmeri Yo ga abụ 2/36 ma ọ bụ 1/18. Yabụ, ikekwe ị na-emeri egwuregwu Yo t rigged bụ naanị 5.56% d e ọnụ ụlọ maka nzọ Yo ga-abụ 11.1percent nke mara mma dị elu!
Ọnụ ụlọ dị elu na-arụ ọrụ na ihu ọma cha cha ma ọ bụghị nke gị.
Ọzọ, anyị gafere na mpi mpi. Ọnụọgụ nke mmeri mpi mpi na Craps bụ 1 t 5 ma ọ bụ 20%. Typicallylọ that a na-akwụkarị 27: 4 t 2 t 12, yana 3: 1 t 3 t 11. Isi ọnụ ọnụ ụlọ? 12,5percent nke na – eme ka ọ bụrụ nzọ dị njọ karịa ọbụlagodi Yo.
N’ikpeazụ, anyị na-abanye na nke ọ bụla 7 nzọ nke na-enye gị ezigbo nsogbu nke 1 Id 5. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ahụ na-akwụ 4: 1 ụgwọ. Nke ahụ na-enye ụlọ ọnụ nke 16.67%.
Craps Ndụmọdụ 10: Bịa Id a Craps mmefu self
Kwesịrị ị na-enwe that a nlezianya mmefu ego na ebe ọ bụla ị na-egwu cha cha egwuregwu. Mgbe ị na-akpọ craps a mmefu ego bụ ihe ndị ọzọ dị mkpa. Website t ọtụtụ nhọrọ ịkụ nzọ dị iche iche dị, ọ ga-ekwe omume ịnweta ọtụtụ narị buckn’ihe egwu ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị ịkụ nzọ $ 1 kacha nta na akara pasvvcs.
Ọ bụrụ na ị kpacharaghị anya, ị nwere ike ịmefu self love gị.
Bịa na sistemụ ga – enyere gị aka ichekwa self love gị. Dịka ọmụmaatụ, belata nzọ ọ bụla na $ 3 adorable rapara na nzọ ndị m tụrụ aron’elu. Ọzọkwa, mepụta ọnụ ọgụgụ nkwụsịtụ oge ị ga-apụ miniature pụọ maka mgbede (dịka $50).
Inwe ụdị iwu ndị that a ga – ga eme ka ị nwee ike ịnụ ụtọ igwu egwu na – enweghị nchegbu maka ịchụ self gịn’otu oge.
Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Bitcoin kachasị mma – Blogt Wildado
Chọta Ebe Kwesịrị Ekwesịn’Onlinentanet
Netherlands vs Ukraine Euro 2021 Amụma, Nsogbu na ịkụ nzọ Atụmatụ